Ngisenza kanjani isikhathi sihambe ngokushesha noma sihambe kancane? - Mytika Speak
Ikhaya / I-Universe / Ngisenza kanjani isikhathi sihambe ngokushesha noma sihambe kancane?
Isikhathi is a umbono lokho kucace kumuntu ngamunye. Kanjalo, umuntu angayinciphisa noma ayisheshise ngendlela afisa ngayo.
Ukwehlisa isikhathi, kuzodingeka ushintshe amandla akho abe amandla ahamba kancane futhi azole ngokwengeziwe. Enye indlela yokwenza lokhu ukunciphisa izinga lakho lokujabula. Thatha umoya ojulile bese uzama ukuzidambisa. Zama ukwenza izinto ngejubane elincane. Uma ulwazi lwakho luyisicefe, kuthatha isikhathi eside.
Isibonelo, uKason ubelinde ngabomvu ukuthi intombi yakhe uShauna ibuye ekolishi ngempelasonto. Ngemuva kokulanda uShauna esikhumulweni sezindiza, bobabili baxoxelana ngenjabulo ngezinto ezenzeka empilweni yabo. UKason ubheka ifoni yakhe athole ukuthi sekuphele amahora amathathu uShauna efikile, kodwa ubezofunga ukuthi bekuyihora elilodwa kuphela. UKason ufuna ukwehlisa isikhathi ukuze akwazi ukuchitha isikhathi esithe xaxa noShauna ngaphambi kokuthi ahambe. Adonse umoya kakhulu bese eshintsha umculo osemsakazweni awenze isiteshi esidlala izingoma ezihamba kancane. Baqhubeka bekhuluma kepha izinga labo lentokozo lehlile futhi, njengoba kuhlosiwe, isikhathi sihamba kancane. UKason wehlise ngempumelelo umbono wakhe wesikhathi waze wazizwa sengathi kudlule isonto, yize uShauna esedolobheni izinsuku ezimbili kuphela.
Ukwenza isikhathi sihambe ngokushesha, udinga ukukhuphula izinga lakho lokujabula. Uma wenza okuthile ongakuthandi, cula ingoma ekhanda lakho noma udlale umculo othokozisayo (cabanga ngengoma yetimu engenakwenzeka). Thola enye indlela yokuziqinisa ukuze ukwazi ukushintsha amandla akho uwasebenzise asheshe ngokwengeziwe. Amandla asheshayo enza isikhathi sihambe ngokushesha okukhulu.
Isibonelo, uGus uhleli esigabeni somlando kepha akakuthandi ukufunda ngeManifest Destiny. Ubona sonke isihloko njengesicefe. Uma ebheka isikhathi, uyabona ukuthi isandla sesibili sithatha unomphela phakathi kwemikhaza futhi kubonakala sengathi isigaba sakhe ngeke siphele. UGus unquma ukwenza ngokucophelela ukwenza isikhathi sihambe ngokushesha. Ubheka ezinye izindlela. Mhlawumbe kufanele acabange ngalokho akwenzayo ngemuva kwesikole. Lokho kuzosebenza. Mhlawumbe kufanele adwebe izithombe ezithile encwadini yakhe yokubhalela. Lokho kuzosebenza futhi. UGus ekugcineni unquma ukunaka ngempela uthisha. Uyilandela eduze lendaba bese ecabanga ukuthi kungaba yini ukube labo balingisi bomlando baphila ezikhathini zanamuhla. UGus ubheka phezulu futhi uyabona ukuthi lelo klasi selizophela. Isikhathi sihambe ngokushesha okukhulu ngoba uGus uziphoqelele ukuthi abe nentshisekelo kule ndaba. Ngenxa yesinqumo sakhe, wafunda nezinto zasekilasini njengomphumela ohlangothini.
Isikhathi siwumbono omkhulu,
ilusizo ekwakheni imiqondo.
Kuvulwe ngawo wonke umkhaza,
lapha ngangena ngokuphazima kweso nje.
Inhloso engachazwanga kangako,
nokho ilawulwa ngumqondo oqeqeshiwe.
Kuyavumelana futhi akupheli,
ukucindezela kungaba okungenangqondo.
Isikhala esingenasici kokungaziwa,
dansa ngomusa ukuqondisa ukugeleza kwakho.
Yima endaweni lapho ngizwa kahle,
shesha shiya lapho ubukade ume khona.
Amathegiukuqonda Ugqozi izinkondlo isikhathi esisheshayo shesha isikhathi ingokomoya
Novemba 28, 2020 ku-7: 14 pm
Ukufundwa okuthakazelisayo! Isikhathi umqondo othakazelisayo. Abanye bathi isikhathi asibalulekile! Cabanga ngalokho isikhashana…
Novemba 28, 2020 ku-7: 52 pm
Ngiyajabula ukuthi usijabulele lesi sihloko. Ngicabanga ukuthi nawe ungakuthakasela lokhu: https://mytikaspeak.com/does-time-and-space-exist/
Novemba 28, 2020 ku-8: 32 pm